Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Diiday Dhagaysiga Codad Laga Duubay Dilkii Khashuqji.
Trump oo Diiday Dhagaysiga Codad Laga Duubay Dilkii Khashuqji.
Posted by Dayr	/ November 20, 2018
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in warbixin laga siiyey cajalad maqal ah oo laga duubay dilka suxufigii Sacuudiga Jamal Khaashuqji loogu gaystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Isnatbul, balse uusan dooneyn inuu dhageysto, sababo la xiriira rabshadaha ay xambaarsan tahay.
“Waa cajalad xanuun badan, waa cajalad aad u xun” ayuu Trump u sheegay taleefishinka Fox News oo uu wareysi ku siiyey Aqalka Cad jimcihii. “Waa cajalad aad u rabshad badan, oo aad u xun, oo arxan la’aan ah” ayuu sii raaciyey.
Trump ayaa sabtidii sheegay in dowladda Mareykanka ay maanta Talaado ah shaaca ka qaadi doonto waxa ay ka ogtahay dilka Khaashuqji oo dhacay Labadii October.
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka waxay sheegtay in weli aan wax go’aan ah laga gaadhin cidda amartay dilka, hase yeeshee warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa CIA-da kasoo xigtay inay go’aamisay in dilka uu amray dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Mar ay Fox News wax ka weydiiyey Trump in Maxamed Bin Salmaan uu uga been sheegay ku lug lahaanshihiisa dilka, wuxuu yiri “ma aqaan, yaa ogaan kara, balse wuxuu haystaa dad badan oo leh waxba kama ogeyn”